Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Imoto eNtsha yePremium yeMidlalo yeCompact
-I-Integra Prototype ibhengeza ukubuya kwe-nameplate ye-iconic kuluhlu lwe-Acura
-I-2023 Integra iya kuba ngumdlalo weprimiyamu compact kunye nophahla olufana ne-coupe kunye noyilo oluguquguqukayo olunamacango amahlanu okuphakamisa umva
-I-Integra yokuqala ye-factory-turbocharged ithatha amandla kwimveliso ephezulu ye-1.5-litre kunye ne-VTEC®
– Ilungiselelwe abathandi, i-6-speed manual transmission iya kunikezelwa
-Umnqweno okhethekileyo kwaye uyafikeleleka, i-Integra entsha ukuqala malunga ne-30,000 yeedola xa ifika kulo nyaka uzayo.
I-Acura namhlanje inike ihlabathi ukujonga okokuqala kwi-Integra entsha elindelwe kakhulu, ebonisa ukubuya kwe-nameplate ebhiyozelwa kuluhlu lwe-Acura. Igqitywe ngokubetha i-Indy Yellow Pearl ipeyinti ebolekwe kwi-NSX, i Integra Prototype luphawu oluqinileyo loyilo lwangaphandle lwe-Acura Integra entsha ka-2023, eya kuxabisa malunga ne-30,000 yeedola xa ifika kubathengisi be-Acura kulo nyaka uzayo.
Uphefumlelwe edlulileyo Integras, kubandakanywa neyokuqala eyanceda ukuqaliswa kwe-brand ye-Acura kwi-1986, i-Integra ka-2023 iya kuba yimodeli entsha yokusebenza kwesango kwi-Acura lineup, i-premium sport compact kunye ne-evocative-design-door-door-design and fun-to-drive spirit. I-Integra yokuqala ngqa kwifektri ye-turbocharged iya kuchulumancisa isizukulwana esitsha sabaqhubi abathandanayo abanesantya esithandathu sothumelo lwezandla, umahluko wokutyibilika olinganiselweyo kunye ne-injini ye-1.5-litre ephezulu, ene-VTEC® kunjalo.
"I-Integra yenye yezona modeli zibalaseleyo kwimbali ye-Acura," utshilo uJon Ikeda, uSekela Mongameli kunye neGosa le-Acura Brand. “Le Integra entsha, iza kuqhubeka ukunikezela ngeyokuqala eyodwa enqwenelekayo kodwa iyafikeleleka indawo yemarike, kunye nokusebenza ngokweemvakalelo nesimbo, kudityaniswa nokuguquguquka nokusebenza okufunwa ngabathengi banamhlanje.”
Idizayinwe eJapan, isitayile sangaphandle se-Integra esitsha esinesibindi sinomgca othambekileyo wophahla kunye ne-liftback tailgate, esinika ubukho bendlela obahlukileyo obufana ne-coupe. Utoliko lwangoku lomgca we-Integra, imodeli yesizukulwana sesihlanu ibonisa iimpawu zophawu olufana negama le-Integra echwetheziweyo phantsi kwesibane esisecaleni somqhubi kunye nesibane esisecaleni somkhweli.
Iiarches zamavili angasemva anezihlunu kunye nefascia endlongondlongo engasemva enezigqibo zokuphuma kabini zigxininisa umkhondo obanzi we-Integra. Ikhuthazwe ziimodeli zangaphambili ze-Integra, isitayile sangemva esahlukileyo sibonisa ububanzi, isiqwenga somsila esinye kunye nesiginitsha yokukhanya ehambelana ne "Chicane". Emva kwe-Integra Prototype's matte-finish 19-inch split-five wheels kukho iBrembo™ ezisebenza ngokugqithisileyo iziqhoboshi ezinezitshixo ze-Indy Yellow calipers ezinombala, zinika amandla amangalisayo okumisa kunye nenkangeleko endlongondlongo.